Shirwaynaha isgaadhsiinta dunida oo maanta Geneva ka furmaya. – Radio Daljir
Oktoobar 25, 2011 12:00 b 0
Geneva, Oct 25- Shirweynaha ururka isaadhsiinta dunida ee (ITU) ayaa maanta ka furmaya magaalada Geneva ee Switzerland, waxana kulanka oo soo afmeermi doona lagu wadaa in laga soo saaro qodobbo wax wayn tari doona isgaadhsiinta dunida.
Wusurada isgaadhsiinta ee 55 dal, iyo wakiillada 150 shariikadood oo isgaadhsiinta iyo umuuraha teknolojiyadda ka shaqeeya ayaa ka qayb galayan kulankan oo lagu wado in go?aamadiisu ay ku salaysnaadaan baahiyo, iyo tallaabooyin horumar oo laga doodayo maalmaha kulanku uu socdo.
Wasiirka wasaaradda Warfaafinta, Boosaha, iyo Isgaadhsiinta ee DFKM C/qaadir Xuseen Maxamed (Jaahweyn) ayaa Soomaaliya uga qayb galaya.
Soomaaliya waa mid ka mid ah dalalka qaaradda Afrika ee ay sharikado gaar loo leeyahay oo ka hawl gala ay horumar wanaagsan ka sameeyeen isgaadhsiinta, sidoo kale Soomaaliya waxaa si wayn looga isticmaalaa in badan oo ka mid ah teknolojiyadda horumartay ee dunida.
M/weyne Shariif & R/wasaare Gaas oo mawaaqif kala duwan ka istaagay duullaanka Kenya.